Ku hagaaji cusbooneysiinta Qalabka Naqshadaynta ee Android | Abuurista khadka tooska ah
Behance ayaa lagu cusbooneysiiyay qaabkeeda Android-ka ah Naqshadeynta Waxyaabaha
Naqshadaynta Maaddadu waa hannaankii naqshadeynta ee ay soo rogtay Google sanadkii la soo dhaafay si aqlabiyada ugu badan ee barnaamijyada iyo isdhexgalka Android ay u aadaan xariiqyadan ku guuleystey inay abuuraan hooseeyaha guud si markaa isticmaalehu u helo dareenka ugu fiican markuu daalacanayo barnaamijkooda ay jecel yihiin.
Hadda waa Behance kaas oo lagu cusbooneysiiyay nooca 3.0 illaa Naqshadeynta Qalabka si loo keeno, marka la soo koobo, barnaamij ka fiican si loo helo dhammaan sifooyinka barxaddan caanka ah. Animations qaar ka mid ah, tweak cusub nook kasta iyo qayb cusub ayaa ah astaamaha ugu xiisaha badan ee cusbooneysiinta oo hadda diyaar u ah soo dejinta.
Haddii barnaamijkii hore ee Android horey u lahaa tayo wanaagsan, hadda ku dheji Nashqada Qalabkan taasi waxay ka dhigeysaa taabashada dhammeystirka dhinacyo dhowr ah sida waxqabadka oo la hagaajiyay, shaashad weyn oo shaqooyin badan lagu ogaan karo maadaama boosku si wanaagsan u abaabulan yahay iyo qayb cusub oo ah "shaqooyin bannaan" oo aad ka heli karto shaqooyinka ay ka codsadaan shirkadaha ama istuudiyaha farshaxanka / naqshadeynta.
Behance ayaa rabtay daabac shaabaddaada tayada Noocaan cusub, 3.0, oo leh walxaha Naqshadeynta Maaddooyinka qaarkood sida badhanka FAB ee u oggolaanaya, marka mashruuc lagu jiro, in si dhaqso leh loogu diro faallo, xitaa haddii aan baarno sawirrada kala duwan ee hal-abuurka.
Waxay kaloo leedahay siyaado kale oo yar sida taageerada rukhsadaha Marshmallow iyo raadinta la hagaajiyay iyadoo la tixraacayo in culeyska la saaray hadda sawirka farshaxanka, sida ku dhacday muuqaalkiisa oo ah halka muuqaalkiisu ka muuqdo baaxad weyn.
Cusbooneysiin loo baahan yahay lana doonayo Taasi waxay ugu dambeyntii soo degtay si, taleefankaaga Android ama kiniinigaaga, aad uga faa'iideysan karto si buuxda barxadda weyn ee ay ku kulmaan dhammaan noocyada fannaaniintu.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Behance ayaa lagu cusbooneysiiyay qaabkeeda Android-ka ah Naqshadeynta Waxyaabaha
Daabacaad: Nin oday ah ayaa been u sheegaya geeridiisa si uu ula midoobo qoyskiisa oo dhan Ciida Kirismaska